प्लाज्मा दानले हटायो विभेद
‘निको भएकाको रगतले अरू संक्रमितलाई बचाउन सकिने थाहा पाएपछि छरछिमेकको हेराइ एकाएक बदलिएको छ ।’
भाद्र २९, २०७७ अमृता अनमोल
बुटवल — बुटवल–११ देवीनगरका व्यवसायी सुरज क्षत्रीलाई भदौ १ गते कोरोना संक्रमण देखियो । उनको परिवारका थप तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । कुनै लक्षण नभएकाले उनीहरू घरमै बसे । तर, छरछिमेकले विरोध गरे ।
आइसोलेसनमा जान दिएको दबाब नमानेपछि बोलीसमेत बारेर बसे । ‘के चाल छ भनेर सोध्ने पनि कोही भएन,’ सुरजले भने, ‘फोन र इन्टरनेटबाट बोल्दा पनि सर्लाजस्तो गरे ।’
१४ दिनपछि उनी निको भए । तर पनि छरछिमेकको स्वभाव बदलिएन । तिनै सुरजलाई एक सातायता छरछिमेकले नियमित सोधखोज थालेका छन् । ‘जब प्लाज्मा थेरापी सुरु भयो । मैले रक्तदान गरें,’ सुरजले भने, ‘छरछिमेकले हाम्रो मात्रै रगत काम लाग्ने थाहा पाएछन् । त्यसपछि एकाएक सोधीखोजी सुरु भयो ।’ नचिनेका व्यक्तिले समेत फोन गरेर हालचाल सोध्ने र आवश्यक परे रगत दिन भनेको उनले बताए ।
बुटवल–१२ तामनगरका राजु आचार्यलाई साउन २२ गते संक्रमण देखियो । दुई दिनपछि तामनगर खानेपानीमा कार्यरत पत्नी भगवतीमा पनि संक्रमण पुष्टि भयो । सँगै घरमा रहेकी ९३ वर्षीया हजुरआमा, बुबाआमा र छोराछोरीमा संक्रमण थिएन । कुनै लक्षण नभएकाले आचार्य दम्पतीले घरमै आइसोलेसनमा बस्ने निधो गरे । त्यसले छरछिमेक रुष्ट भए । घरअगाडिको बाटो हिँड्न छाडे । ‘कतिपयले घरमा बस्न दिनुहुन्न भन्नुभयो । भैंसी चराउन खेतमा जान दिइएन,’ भगवतीले सुनाइन्, ‘१४ दिनमा कोरोना जित्यौं । तर, नकारात्मक प्रभाव जित्न समय लाग्यो ।’ अहिले यी दम्पतीको प्रशंसा भइरहेको छ । प्लाज्मा थेरापी सुरु भएपछि उनीहरूको सोधीखोजी भएको हो ।
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापी गर्न निको भएका संक्रमितको रगत आवश्यक परेको थियो । भदौ १८ गते रक्त सञ्चार केन्द्रले तिनै दम्पतीलाई रक्तदान गर्न आग्रह गर्‍यो । दम्पतीले नै खुसीखुसीले रक्तदान गरे । ‘संक्रमण निको भएपछि पनि समाजमा घुलमिल हुन सकेका थिएनौं,’ राजुले भने, ‘त्यस्तोमा हाम्रै रगत काम लाग्ने र कोही बाँच्ने थाहा पाएपछि खुसीको सीमा रहेन ।’
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालले भदौ पहिलो सातादेखि संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीद्वारा उपचार परीक्षण सुरु गरेको हो । चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको शरीरमा त्यसको प्रतिक्रियाका लागि प्रतिरक्षा प्रणालीले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ । रगतमा हुने एन्टिबडीले भाइरससँग लड्ने काम गर्छ । संक्रमण निको भएकाको रगतमा हुने त्यही प्लाज्मा संकलन गरी संक्रमितलाई दिइन्छ । जसलाई प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ । त्यसका लागि संक्रमण निको भएका व्यक्तिले रगत दिनुपर्ने हुन्छ । यही रगतका कारण दुव्र्यवहारमा परेका संक्रमितको सम्मान र सोधखोज सुरु भएको छ ।
प्लाज्मा दानकै कारण पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–४ की ४१ वर्षीया गीतादेवी चापागार्इं खुलेर बोल्न सक्ने भएकी छन् । संक्रमणपछि गुम्सिएकी उनी भदौ २३ गते रक्तदानका लागि बाहिर निस्किन् । ‘समाजमै दोस्रो दर्जाका रूपमा बसेका बेला निको भएका संक्रमित खोज्दै बुटवलबाट आउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘निको भएकाको रगतले अरू संक्रमितलाई बचाउन सकिने थाहा पाएपछि छरछिमेकको हेराइ एकाएक बदलिएको छ ।’
संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापी दिन सुरु गरिएसँगै बुटवलमा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिएको छ । संक्रमितलाई आवश्यक परेका बेला तत्काल प्लाज्मा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् प्रदेश ५ को समन्वयमा रक्त सञ्चार केन्द्रमा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिएको हो । अहिलेसम्म ४७ जना संक्रमणबाट निको भएकाले रक्तदान अर्थात् प्लाज्मा दान गरेका छन् । स्वयंसेवी रक्तदाता समाज, रेडक्रस सोसाइटीलगायतले कपिलवस्तुको तौलिहवा, पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट र रूपन्देहीका गाउँगाउँमा पुगेर अहिले प्लाज्मा संकलन गरिरहेका छन् ।
‘संक्रमित पत्ता लगाउने र रक्तदानका लागि प्रेरित गर्ने काम जारी छ,’ रक्तदाता समाजका अध्यक्ष कृष्ण चौहानले भने, ‘यसले एकातिर लुकेर बसेका संक्रमितलाई समाजमा स्थापित गर्न सहज भएको छ । अर्कोतिर संक्रमित बिरामीका लागि प्लाज्मा थेरापी गराएर बाँच्ने दर बढाउन सकिएको छ ।’ संक्रमितलाई हुने हेयभाव घट्ने र बिरामी निको हुने भन्दै सुरुवातमा चिकित्सकहरू नै प्लाज्मा दान गर्न अघि सरे । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. साजन श्रेष्ठले पहिलो पटक भदौ ८ गते प्लाज्मा दान गरे ।
त्यसलगत्तै भदौ १८ गते कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा अस्पतालका मेसु डा. किशोर बन्जाडेसहित अस्पतालका १६ जना पूर्वसंक्रमितले रक्तदान गरे । ‘संक्रमितहरू जीवनमरणको दोसाँधमा छटपटिरहेका बेला हाम्रो रगतले कसैको ज्यान बच्छ भने किन अघि नसर्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले अस्पतालका सबै पूर्वसंक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले रक्तदान गर्‍यौं । अरूलाई पनि रक्तदानका लागि हौसाएका छौंं ।’ बुटवलमा अहिलेसम्म १७ जना संक्रमितमा प्लाज्मा थेरापी गरिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ १४:३२